ဝေးလံခေါငျသီတဲ့ဒသေကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘှားတှကေို လူငယျတဈယောကျ ဓာတျပုံရိုကျပွီး မစူးစမျးမဆငျခွငျဘဲ Onlineပျေါ တငျလိုကျသောအခါ – Shwe Yaung Media
ဝေးလံခေါငျသီတဲ့ဒသေကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘှားတှကေို လူငယျတဈယောကျ ဓာတျပုံရိုကျပွီး မစူးစမျးမဆငျခွငျဘဲ Onlineပျေါ တငျလိုကျသောအခါ
အဘှားးတို့ကို မလှောငျကွပါနဲ့ သားတို့ရယျ မလှောငျပါနဲ့ သားရယျ…ဝေးလံခေါငျသီတဲ့ ဒသေကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘှားတှကေို လူငယျတဈယောကျ ဓာတျပုံရိုကျပွီးမစူးစမျးမဆငျခွငျဘဲ Onlineပျေါ တငျလိုကျတယျ။သူတငျလိုကျတဲ့ပုံက ခဏအတှငျးမှာပဲ ပွနျ့သှားပွီးတဈခြို့က လှောငျကွ တဈခြို့က မလှောငျသငျ့ကွောငျးပွောကွတာပေါ့…။ဒါကို အဲ့ဒီလူငယျကမသိသေးပါဘူး…အဲ့ဒီနောကျ အဘှားတှရှေိရာကို သှားပွီး အဘှားတဈယောကျကို သှားမေးတယျ။
လူငယျ – ဘှားဘှား တဈခုလောကျမေးပါရစေ?ဘှားဘှား – ရပါတယျ… မေးပါ သား…လူငယျ – ဘှားဘှားတို့က ဘုရားဖူးလာတာဆိုရငျ ဘာဖွဈလို့ ဝတျကောငျးစားလှ ဝတျပွီး မလာကွတာလဲ..?
သားတို့ မွို့ကွီးက လူတျောတျောမြားမြားက ဘုရားဖူးသှားကွရငျ ဝတျကောငျးစားလှတှေ ဝတျကွတယျ…။ဘှားဘှား – ဒီလိုကှဲ့သား…အဘှားတို့က ဘုရားကို ဖူးဖို့ပဲလာတာ။ဘုရားဖူးဖို့ ဝတျကောငျးစားလှတှဝေတျမှ
ဖူးရမယျလို့ဘုရားကဟောလို့လားအဓိကက စိတျပဲသားရဲ့…ဘှားဘှား – အဘှားတို့. ဖိနပျကို ခါးကွားညှပျလို့. သားက လှောငျရယျခငျြရယျနလေိမျ့မယျ…ဒါက သားတို့ မွို့ပွက လူတှကေို မယုံလို့လညျး မဟုတျပါဘူး ဖိနပျပြောကျမှာ ကွောကျလို့လညျး မဟုတျပါဘူးသား…
ဘှားဘှား – ကိုယျ့ဖိနပျတှကေို ကိုယျနဲ့တပါးတညျးယူသှားတော့ အပျခမကုနျတော့ဘူး….လူတှမြေားတဲ့ဘုရားပျေါမှာ ဖိနပျတှလေညျးမြားမှာလေ…အဲ့ဒီအခါ တိုးဝှလေို့ကျရှာစရာမလိုတဲ့အတှကျ အခြိနျမကုနျတော့ဘူး..လိုရာခရီးကို မွနျမွနျသှားနိုငျတာပေါ့ သား…။
လူငယျ – ဟုတျကဲ့ ဘှားဘှား..။ လူတှေ ဝိုငျးကွညျ့ပွီးရယျတော့ဘှားဘှားတို့ ရှကျလား… ??ဘှားဘှား မရှကျပါဘူးသားရဲ့..သူမြားပစ်စညျးကို အဘှားတို့ခိုးပွီးယူလာတာမှ မဟုတျတာ…လူငယျ – ဟုတျ ဘှားဘှား ။ဘှားဘှားတို့ဆီမှာလညျး အဲ့လိုပဲနကွေတာလား…?ဘှားဘှားဟုတျတယျ သား…။
အဘှားတိုိ့ဆီမှာက ဝတျကောငျးစားလှ ဝတျပွီးစိတျဓာတျမကောငျးတဲ့သူတှကေို အထငျမကွီးကွဘူး…ဆငျးရဲပမေဲ့ စိတျထားကောငျးတဲ့သူတှကေိုပဲ အဘှားတို့ အထငျးကွီးတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ သား လူတဈယောကျကို အပျေါယံကွညျ့ပွီးမလှောငျပါနဲ့လို့. အဘှားမှာခငျြတယျ…။
ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကို လူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Onlineပေါ် တင်လိုက်သောအခါ
အဘွားးတို့ကို မလှောင်ကြပါနဲ့ သားတို့ရယ် မလှောင်ပါနဲ့ သားရယ်…ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကို လူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Onlineပေါ် တင်လိုက်တယ်။သူတင်လိုက်တဲ့ပုံက ခဏအတွင်းမှာပဲ ပြန့်သွားပြီးတစ်ချို့က လှောင်ကြ တစ်ချို့က မလှောင်သင့်ကြောင်းပြောကြတာပေါ့…။ဒါကို အဲ့ဒီလူငယ်ကမသိသေးပါဘူး…အဲ့ဒီနောက် အဘွားတွေရှိရာကို သွားပြီး အဘွားတစ်ယောက်ကို သွားမေးတယ်။
လူငယ် – ဘွားဘွား တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ?ဘွားဘွား – ရပါတယ်… မေးပါ သား…လူငယ် – ဘွားဘွားတို့က ဘုရားဖူးလာတာဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ပြီး မလာကြတာလဲ..?
သားတို့ မြို့ကြီးက လူတော်တော်များများက ဘုရားဖူးသွားကြရင် ဝတ်ကောင်းစားလှတွေ ဝတ်ကြတယ်…။ဘွားဘွား – ဒီလိုကွဲ့သား…အဘွားတို့က ဘုရားကို ဖူးဖို့ပဲလာတာ။ဘုရားဖူးဖို့ ဝတ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်မှ
ဖူးရမယ်လို့ဘုရားကဟောလို့လားအဓိကက စိတ်ပဲသားရဲ့…ဘွားဘွား – အဘွားတို့. ဖိနပ်ကို ခါးကြားညှပ်လို့. သားက လှောင်ရယ်ချင်ရယ်နေလိမ့်မယ်…ဒါက သားတို့ မြို့ပြက လူတွေကို မယုံလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး ဖိနပ်ပျောက်မှာ ကြောက်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူးသား…
ဘွားဘွား – ကိုယ့်ဖိနပ်တွေကို ကိုယ်နဲ့တပါးတည်းယူသွားတော့ အပ်ခမကုန်တော့ဘူး….လူတွေများတဲ့ဘုရားပေါ်မှာ ဖိနပ်တွေလည်းများမှာလေ…အဲ့ဒီအခါ တိုးဝှေ့လိုက်ရှာစရာမလိုတဲ့အတွက် အချိန်မကုန်တော့ဘူး..လိုရာခရီးကို မြန်မြန်သွားနိုင်တာပေါ့ သား…။
လူငယ် – ဟုတ်ကဲ့ ဘွားဘွား..။ လူတွေ ဝိုင်းကြည့်ပြီးရယ်တော့ဘွားဘွားတို့ ရှက်လား… ??ဘွားဘွား မရှက်ပါဘူးသားရဲ့..သူများပစ္စည်းကို အဘွားတို့ခိုးပြီးယူလာတာမှ မဟုတ်တာ…လူငယ် – ဟုတ် ဘွားဘွား ။ဘွားဘွားတို့ဆီမှာလည်း အဲ့လိုပဲနေကြတာလား…?ဘွားဘွားဟုတ်တယ် သား…။
အဘွားတိုိ့ဆီမှာက ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ပြီးစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့သူတွေကို အထင်မကြီးကြဘူး…ဆင်းရဲပေမဲ့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေကိုပဲ အဘွားတို့ အထင်းကြီးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် သား လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ပြီးမလှောင်ပါနဲ့လို့. အဘွားမှာချင်တယ်…။
အလုပျအကိုငျ မရှိကွတော့လို့မြားလားရခိုငျပွညျ ဂှမွို့နယျရှိ ရှေးဟောငျးစတေီတဆူ ဌာပနာ ဖောကျထှငျးခံရပွနျပွီ
သူနာပွုယူနီဖောငျးနဲ့ မွငျတိုငျး သူနာပွု အစဈလို့ မထငျလိုကျကွပါနဲ့…